१.७४ अंकले बजार बढ्यो, करिब २ अर्बको शेयर कारोबार - समय-समाचार
१.७४ अंकले बजार बढ्यो, करिब २ अर्बको शेयर कारोबार
Oct 12, 2020 कित्ता, शेयर काराेबार, शेयर बजार, सेन्सेटिभ इन्डेक्स
काठमाडौं, असाेज २६ । सोमबार शेयर बजार १ दशमलव ७४ अंक बढेर १ हजार ५७८ दशमलव शून्य १ विन्दुमा पुगेको छ ।
यो दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स १ दशमलव ३७ अंक बढेर ३१३ दशमलव १० विन्दुमा पुगेको छ । गत विहीवारदेखि घटेको बजार सोमवार भने न्यून अंकले बढेको हो ।
यस दिन १ अर्ब ९४ करोड ९० लाख ६० हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन १८९ कम्पनीको यो रकम बराबरको ६८ लाख १५ हजा ७१० कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । सोमवार विकास बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताहरुको बढी आकर्षण देखिएको छ । कारोबारमा आएका १२ समूहमध्य विकास बैंक समूहको परिसूचक सर्वाधिक ३ दशमलव ८८ प्रतिशत बढेको छ । यस दिन बैंकिङ्को शून्य दशमलव १९ प्रतिशत, व्यापारिकको शून्य दशमलव २१ प्रतिशत, होटलको शून्य दशमलव ४ प्रतिशत र लघुवित्तको शून्य दशमलव १६ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
वित्त समूहको परिसूचकमा सोमवार सर्वाधिक गिरावट आएको छ । यस दिन वित्त समूहको परिसूचक १ दशमलव ३५ प्रतिशतले घटेको हो । त्यस्तै जलविद्युत समूहको शून्य दशमलव ५२ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको शून्य दशमलव १६ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव १८ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव ३ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
सोमवार सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने पहिलो नम्बरमा मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको छ । यस बैंकको यो दिन रू. १६ करोड ५० लाख ८ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक कारोबारसँगै मुक्तिनाथ विकास बैंकको शेयरमूल्य पनि यो दिन सर्वाधिक ९ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेको छ ।
मुक्तिनाथको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ३३ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३६८ पुगेको हो । यो दिन सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य सर्वाधिक ६ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले घटेको छ । यस कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ५५ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ८५४ मा झरेको हो ।